Ooredoo, UNDP Partner on Climate Resilience Program for Farmers | Myanmar Business Today
Home IT & Telecom Ooredoo, UNDP Partner on Climate Resilience Program for Farmers
Ooredoo Myanmar signedapartnership agreement with the United Nations Development Programme (UNDP) on December 16 to support the implementation of the Sustainable Enterprises and Agricultural Development (SEAD) project.
The partnership aims to establish an inclusive and sustainable rural development model in Myanmar’s Dry Zone Region by leveraging Ooredoo’s advanced mobile technology and UNDP’s experience in promoting climate-resilient farming practices.
The 15-month project will provide an agricultural support package to vulnerable farming communities in the Dry Zone to promote income diversification and resilient livelihoods. Some 130 villages in Myingyan and Nyaung U townships are expected to directly benefit from the project.
SEAD will also provide virtual climate advisory services and promote sustainable agricultural and livestock breeding practices in partnership with key government agencies. Moreover, it will help match supply with demand for sustainable farming and related inputs and services, support value addition in the agriculture and livestock sectors and connect farmers to markets and credit through the use of mobile money.
“The SEAD project will make it possible for rural communities to overcome specific bottlenecks and realize more of their potential through mobile market linkages as well as enhanced productive capacities,” said UNDP Resident Representative Gordon Johnson.
Ooredoo Myanmar and UNDP Myanmar signed an MoU in November 2018, marking the start ofatwo-year partnership to undertake catalytic joint activities to unlock the potential of digital technologies for the achievement of sustainable development goals (SDGs) in Myanmar.
Since then, the two partners have successfully organized two rounds of Hackathons, in 2018 and 2019, and launched the Ooredoo-UNDP SDG Incubation Hub in October 2019.
ကျေးလက်နေပြည်သူများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း (SEAD) ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် အူရီဒူးမြန်မာနှင့် UNDPတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်
ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အူရီဒူးမြန်မာနှင့် UNDPတို့ လုပ်ငန်းပူး ပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့က ရေးထိုးခဲ့သည်။
အူရီဒူး၏ မိုဘိုင်းနည်းပညာနှင့် UNDP မှ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် လယ်ယာလုပ်ငန်း အလေ့အထများ အတွေ့အကြုံများကို အသုံးချ၍ ရေရှည်တည်တံ့သော ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး စံပြပုံစံတစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းသည် ၁၅လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း၏ အကျိုးကျေးဇူးကို မြင်းခြံမြို့နယ်နှင့် ညောင်ဦးမြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၁၃၀တို့မှ တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
SEAD စီမံကိန်းသည် အပူပိုင်းဇုန်ရှိ အားနည်းချက်များရှိသော တောင်သူလယ်သမားများအား ဝင်ငွေရင်းမြစ်စုံလင်လာစေရေး နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများကို မြှင့်တင်ပေးသည့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်လာစေရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ရေရှည်အတွက်ကောင်းသည့် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်လာစေရန် ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားကို ချိန်ညှိဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တောင်သူလယ်သမားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စနစ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သွင်းအားစုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွင် တန်ဖိုးမြင့် ထုတ်ကုန်များဖြစ်လာစေရန် ကူညီပေးခြင်း၊ တောင်သူလယ်သမားများကို (မိုဘိုင်းငွေကြေးကို အသုံးပြု၍) ချေးငွေစနစ် နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ဈေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“SEAD စီမံကိန်းဟာ ကျေးလက်နေပြည်သူတွေကို သူတို့ရဲ့ ဒေသတွင်း ဖွံဖြိုးရေးအခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်စေဖို့၊ မိုဘိုင်းအိုင်စီတီနည်းပညာနဲ့ မောင်းနှင်နေတဲ့ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှု အလားအလာကောင်းတွေကို နားလည်သဘောပေါက်စေဖို့နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားတိုးတက်စေဖို့အတွက် ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ယူအင်ဒီပီ၏ လက်ရှိဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Mr. Gordan Johnson က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ SDGs ပန်းတိုင်များ ရရှိရေးတွင် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ အလားအလာကို ဖွင့်ထုတ်ပေးမည့် အားဖြည့်လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နှစ်နှစ်ကြာ မိတ်ဖက်အဖြစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အူရီဒူးနှင့် ယူအင်ဒီပီတို့ လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် နည်းပညာပြိုင်ပွဲကြီး ဖြစ်သည့် (Hackathon) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တွင် တစ်ကြိမ်စီ အောင်မြင်စွာ စီစဉ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အူရီဒူး-ယူအင်ဒီပီ- SDG စင်တာ (SDG Incubation Hub) ကိုလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleTMH Diversifies into Media and Entertainment
Next articleNew Year Celebrations in Yangon